आहा ! टेकु प्रयोगशालाको लोभलाग्दो मनोबल मध्यरातसम्म कोरोना परीक्षणमै हुन्छन् प्रयोगशालाका कर्मचारी
दिनेश गौतम काठमाडौं, २५ वैशाख
‘पर्सामा थप १७ जानमा कोरोना पुष्टि भयो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९९ सय पुग्यो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार यो समाचार सार्वजनिक गरिरहँदा हामी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्राङ्गणमै थियौँ ।
कोरोना भाइरसको परीक्षण यही प्रयोगशालाबाट हुन्छ । काठमाडौंबाहिर पनि कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ । तर, केन्द्रमा भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नै छ । प्रयोगशाला अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फोकस भएको छ ।
परीक्षणका लागि देशभरबाट स्वाब राष्ट्रिय प्रयोगशालमा ल्याइने भएकाले धेरैको ध्यान यही प्रयोगशालामा पुग्छ ।
प्रयोगशाला भन्नेबित्तिकै हिजोआज जोकोही पनि जान डराउँछन् । ओहो ! कतै कोरोना भाइरस सर्ने त होइन भन्ने मनमा भय पनि छ ।
देशभरबाट परीक्षणका लागि स्वाब आउने प्रयोगशालाका कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन् ? बाहिर जसरी डर र त्रास छ, त्यस्तो कर्मचारीमा होला कि नहोला ? स्वाब परीक्षणमा खटिने डाक्टर, नर्स, टेक्निसियन, कार्यालय सहयोगीको मनोबल कस्तो होला ?
प्रयोगशाला पुग्नुअघि मनमा यिनै प्रश्नहरू घुमिरहेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रयोगशाला छिर्ने गेटमै सुरुमै जोकोहीको पनि परीक्षण हुन्छ । तापक्रम जाँच गरेपछि मात्र भित्र छिर्न पाइन्छ । परीक्षणका लागि पीपीईसहितका डाक्टर र नर्स गेटमै खटिएका छन् ।
प्रयोगशाला प्राङ्गणको छेउमै छ, स्वाब संकलन केन्द्र । देशभरबाट आएको स्वाब त्यही केन्द्रमा संकलन गरिन्छ । संकलन केन्द्रको वरिपरि छ स्वाब ल्याएको बाक्सा । बिहानदेखि बेलुकासम्म स्वाब ल्याउने क्रम चलिनै रहन्छ ।
‘ए ! बाटो छोड्नुहोस् त, एम्बुलेन्स आयो ।’ एक जना दिदीको आवाज थियो । स्वाब संकलन केन्द्रकै अगाडि एम्बुलेन्स रोकियो । कैलालीबाट परीक्षणका लागि ल्याएको स्वाब रहेछ ।
त्यसपछि त्यहाँ रहेका मानिस लाखापाखा लागे । ती दिदीले थपिन्, ‘किन भागेको ? डराउनु पर्दैन ।’
संकलन केन्द्रको काेठामा स्वाब राखेपछि हामीले उनलाई सोध्यौँ, ‘तपाईंलाई डर लाग्दैन ?’
‘के को डर ! कोही न कोहीले त गर्नै पर्थ्यो, हामीले गर्ने अवसर पाएका छौँ । २/३ महिना भयो, यसरी नै काम गरेका छौँ । डराउनु पर्दैन ।’
उनी रहिछन् लक्ष्मी न्यौपाने ।
ओहो ! कति उच्च मनोबल ।
प्रयोगशालाको नेतृत्व गरिरहेकी छन् डा. रुना झाले । उनको नेतृत्वमा प्रयोगशाला अहिले कोरोना फोकस भएको छ ।
हामी उनको कार्यकक्षमा पुग्यौँ । उनी हतारमा देखिन्थिन् । उनको मोबाइलमा घण्टी बजिरहन्छ । संक्रमितको संख्या कति पुगे ? फेरि पोजिटिभ देखिएको हो ? यस्तै प्रश्न उनलाई फोनमा आइरहन्छ । फोनमा बजिरहने घण्टीले पनि उनी कति ब्यस्त छिन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केही बेर हामीलाई उनले समय दिइन् ।
‘प्रयोगशालामा कसरी काम भइरहेको छ ?’
‘रमाइलो छ, चुनौती पनि छ, हामी सकारात्मक छौँ,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झाले भनिन्, ‘गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ । लड्दै पढ्दै सिक्दै काम गर्ने हो ।’
सुरुका दिनमा पोजिटिभ केस नआउँदा मिडियाले गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाएकोमा उनले दु:खेसो गरिन् ।
‘प्रयोगशालामा पोजिटिभ केस नआउँदा गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न पनि उठ्यो । काम गर्नेको मनोबल बढाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘नकारात्मक कुराले मनोबल घटाउँदो रहेछ । अहिले त मनोबल बढाउने हो । मैले मात्र होइन, प्रयोगशालाको कार्यालय सहयोगीदेखि माथिल्लो निकायको सहयोगका कारण मनोबल उच्च बनाएर काम गरेका छौँ ।’
‘यो अवधिमा कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो ?’
‘सुरुका केही दिन केही स्टाफलाई परिवारको दबाब पनि आयो । १/२ जना स्टाफ काममा आउनु पनि भएन,’ उनले भनिन्, ‘३–४ दिनपछि परिवारलाई सम्झाएर काममा आउनुभयो । सबैले आ–आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गरिरहनुभएको छ । प्रयोगशालामा राति १२ बजेसम्म पनि काम भइरहेको छ ।’
‘अनि तपाईंको चाहिँ ?’
‘कोरोना भाइरसपछि परिवारको रेखदेख गर्न सक्ने अवस्था भएन । छोरी र श्रीमानलाई जनकपुर पठाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एक्लै बसेकी छु ।’
त्यसपछि हामी प्रयोगशालाको ल्याबतर्फ लाग्यौँ । हतारहतार गर्दै ल्याब जाने भर्‍याङ चढ्दै थिइन् १ जना दिदी ।
‘के हो दिदी यो ?’
‘के हुनु कोरोना टेस्ट गर्न ल्याएको स्वाब ।’
उनी कार्यालय सहयोगी दिदी रहिछिन् ।
‘स्वाबबाट काेराेना भाइरस सर्दैन त ?’
‘यो बट्टाभित्र छ । कसरी सर्नु ? दिनमा कत्ति बोक्नुपर्छ । खोइ सरेको छैन ।’
त्यसपछि उनी ल्याबभित्र छिरिन् ।
ल्याबमा टेक्नोलोजिस्टहरू स्वाबको परीक्षणमै ब्यस्त थिए । पीसीआरबाट विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएको स्वाबको परीक्षण भइरहेको थियो ।
ल्याबको सह–प्रमुख ज्योति आचार्य स्वाबको परीक्षण गर्दै थिइन् । उनी मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट हुन् । उनले स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन र जान मिल्ने ल्याबको ठाउँसम्म पुर्‍याएर ल्याबकाे अवलाेकन गराई त्यहाँ कसरी काम हुन्छ भन्नेबारे जानकारीसमेत गराइन् ।
‘पीसीआर मेसिन यही हो,’ उनले भनिन्, यही मेसिनबाट परीक्षण गर्ने हो । थोरैबाट सुरु भएको थियो । अहिले यहीँबाट १ हजारवटा नमुनासम्म एकै दिन परीक्षण गर्न सकिन्छ ।’
‘अनि कोरोना महामारीको अनुभूति ?’
‘सचेत भएर गर्छौं । यो त हाम्रो काम हो । पढेकै यही हो । गर्नैपर्‍यो नि,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा मभन्दा पनि परिवारमा डर धेरै थियो । घर पुगेर अर्को लुगा फेरेर छिर्ने गरेकी थिएँ । पछि छोरोहरूलाई पनि सम्झाएँ । खासै त्यस्तो समस्या केही छैन ।’
एकपछि अर्को उनले ल्याब देखाइन् । माथिल्लो तलाको ल्याबमा थिए डा. रञ्जित साह । उनी पनि स्वाब परीक्षणमै ब्यस्त थिए ।
पहिलो कोरोना केस उनैले हेरेका थिए । उनको नेतृत्वमा ६ जनाको टोली थियो । पहिलो कोरोना संक्रमितको स्वाब उनैले निकालेका थिए । त्यो स्वाब परीक्षण गर्न हङकङ पठाइएको थियो ।
‘सुरुको केस थियो । पीपीईबिना नै स्वाब निकालेका थिए,’ उनले भने, ‘परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आयो । पछि नेपालमा पनि परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नै आयो ।’
डा. साहमा न कुनै डर थियो, न त भय नै । आफ्नो कामप्रति उनी विश्वस्त थिए । चीनको वुहानबाट ल्याइएका विद्यार्थीको स्वाब झिक्न पनि उनी नै खटिएका थिए ।
प्रयोगशालाका लागि कति सामग्री आवश्यक छ ? के सकियो ? के आवश्यक छ ? त्यसको रेखदेखमा खटिएका थिए स्टोर प्रमुख शेखरनाथ दाहाल । परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री सकियो भने तत्कालै उनी निर्देशकलाई जानकारी गराउँछन् । कोरोना भाइरसपछि उनी पनि झन् ब्यस्त भएका छन् ।
स्टोर रुमनजिकै छ निर्मलीकरण कक्ष । यहाँ प्रयोगशालामा प्रयोग भएको पीपीई, मास्क, ग्लोब्सलगायत सामग्री पुन: प्रयाेग गर्नका लागि निर्मलीकरण हुन्छ । साे कक्षमा थिए समीर देउला । प्रयोगशालामा काम गर्दा खतरनाक महामारी ल्याउने काेराेना भाइरस र अन्य संक्रामक किटाणुहरू समाजमा र त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा नसरोस् भन्ने उद्देश्यले जति पनि फोहोर हुन्छ, त्यसलाई निर्मलीकरण गरिन्छ । निर्मलीकरण गरेपछि मात्र फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ ।
बाहिर कोरोनाको जति डर छ, त्यहाँ पुग्दा कसैमा पनि डर र त्रास देखिएन । सबैले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गरिरहेका थिए । कार्यालय सहयोगीदेखि निर्देशकसम्मले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका थिए ।
सबैको एउटै स्वर थियो, ‘यो समयमा नकारात्मक होइन, सकारात्मक कुरा गरौँ । हामीलाई काम गर्न पनि हौसला मिल्छ । मनोबल पनि उच्च हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २५, २०७७, १२:५६:००